UMourinho weseka uVan Gaal | News24
UMourinho weseka uVan Gaal
Durban - Umqeqeshi weChelsea, uJose Mourinho, usezwakalise ukweseka uLouis van Gaal wathi uzophumelela kuManchester United.
UMourinho, owake wasebenza ngaphansi kukaVan Gaal iminyaka emithathu kuBarcelona, ukholelwa wukuthi lo mqeqeshi waseHolland angakwazi ukudlulisa i-United kulesi sivunguvungu ebhekene naso kulandela ukungayiqali kahle isizini, kubike iSoccerladuma.
“Ungomunye wabaqeqeshi abaphambili emhlabeni, ngakho-ke ngicabanga ukuthi ungumuntu
owufanele lo msebenzi,” kusho uMourinho etshela abe-Eurosport-Yahoo.
Funda olunye udaba: UVan Gaal usebeke ithemba kuRooney.
“IManchester United iyiqembu elikhulu, ungumqeqeshi osezingeni eliphezulu, ngakho bazokwenza kahle, usho kanje.”